WEDNESDAY MORNING GROUP : Tontosa ny fifamindram-pahefana teo amin’ireo Mpitantana
Fikambanana iray eto Madagasikara anisany mpanohana goavana ireo sahirana sy osa ara-pivelomana ny fikambanana “ Wednesday Morning Group”,izay efa nijoro 55 taona lasa izay. 3 mai 2018
Manoloana ny fitantanana sy fikarakarana mandritra ny fe-potoana 2018-2020 indray àry dia vita afak’omaly tetsy amin’ny Sspace Sahamaitso Nanisana ny fifamindram-pahefana teo amin’ireo filohan’ny Fikambanana.
Ramatoa Marcelle Robinson Radilofe àry no nambara ofisialy io afak’omaly io fa hikolokolo ny fitantanana mandritra izay roa taona izay. Nohamafisiny tamin’ny lahateniny fa “ny fitsinjovana ny reny sy ny zaza no tena hifantohany bebe kokoa mandritra ny fotoampiasany”. Izany hoe hisy ny fanaraha-maso amin’ny lafiny ara-pahadiovana , ny fahasalamana ary ny fanabeazana. Fampandrosoana sy fampivelarana ny reny sy ny zaza araka izany no tena hasongadina.
Efa tanjon’ny fikambanana hatramin’izay moa ny fijerevana ny madinika sy ny fitsinjovana ny hafa mba hampivoarana azy ka tsy miala manodidina ireo ny volavolan’asa tanterahina . Maro ireo vehivavy no miara-misalahy amin’ity fikambanana miahy ny ara-tsosialy ity ka isany mavitrika ao anatin’ izany Ramatoa vadin’ny Filoha tale Jeneralin’ny vondrona orinasa Sodiat Haingo Ravatomanga.
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (366) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (98) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (90) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (73) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (65) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (55) 25 janvier 2021